ODOROS MALE-AWAALKA MUUSE BIIXI MADAXWEYNE AH 0 Monday 15th May, 2017 in Aragtida Dadweynaha by Xarunta Dhexe Visits: 105
ODOROS MALE-AWAALKA MUUSE BIIXI MADAXWEYNE AH QalinkiiCabdinaasir Axmed Abraham
Muuse biixi Jabhad ahaa. Muuse Biixi halgankii nabadda iyo hubka dhiggiika qayb qaatay. Muuse Biixi Wasiir arrimo-gudeed ahaa. Muuse Biixi hoggaanka Xisbi mucaarid ka mid ahaa. Muuse Biixi xisbul-xaakil guddoomiye iyo Musharrax Madaxweyne ba u ah.
4. Wuxuu guulo ka gaadhi doonaa arrimanta Diblamaasiyadda Dhaqanka " Traditional diplomacy"
5. Kuma niyad-sami in uu musuqmaasuqa ka dheeraan doono. Hasa yeeshee, qaataye aan qaado noqon mayso oo wuxuu ka adkaan doonaa golahiisa wasiirrada, qarankana "musuq-wadarreed" ka dhici maayo.
6. Go'aanno badan oo adag oo danyarta u dan ah in uu qaato way u badan tahay.
11. Aqoonta uu ka faa'iidaysan doonaa, oo dad aqoon leh ayuu adeegsan doonaa.